Tendrombohitra misavoana amin'ny vorona dia tsy voafetra | Martech Zone
Tendrombohitra misavoana amin'ny vorona dia tsy voafetra
Alarobia, Septambra 12, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Miaraka amin'ny herinandro 60 any am-piasana mandritra ny herinandro vitsivitsy lasa, sarotra ny manampy 20 na 30 hafa amin'ny tetik'asa an-tsarintany izay ataoko ho an'ny Wild Birds Unlimited. Andro lehibe rahampitso, na izany aza, rehefa asehon'ny WBU ny fampiasa ho an'ny sasany amin'ireo manana franchise.
Tena nanery fampiasa betsaka tamin'ity tranonkala ity izahay, ary manantena ny hanao zavatra bebe kokoa. Misy lamosina Administrative back-end izay ahafahan'ny magazay manavao ny mombamomba azy ireo na manova ny toerana misy azy ireo. Endri-javatra hafa:
GeoIP localization izay mamaritra raha tokony haseho na tsia ny metric na ny standard. Ny GeoIP dia maminany ny toerana misy anao sy ny faritra misy anao ary manangona anao amin'ny sarintany miorina amin'ny adiresy IP mangataka ny pejy.
Ny varavarankely fampahalalana dia mitambatra. Raha tsindrio ny sarintany dia avy amin'ny rakitra KML izy ireo. Raha tsindrio ny toerana eo amin'ny sisin'ny sisin-dàlana, dia mametaka sosona mifandraika amin'ilay sari-tany izy ireo.
Misy torolàlana koa ao, raha manome adiresy bebe kokoa ianao fa tsy fanjakana na faritany fotsiny. Sambany aho namindra ny torolàlana Google, saingy mahatalanjona tokoa. Zavatra iray manamarika… Tsy tena nandalo ny adiresy tamin'ny geocode aho, fa nanampy ny latitude sy ny longitude fotsiny ary nanaron-doha azy ireo tamin'ny anarana (Eto @ 43, -120).
Efa azo alefa amin'ny fikandrana info ireo sary, saingy tsy manana sary voatahiry amin'izao fotoana izao izahay. 🙂 Dingana iray isaky ny mandeha. Raha te hijery ianao dia afaka mitsidika Sarintany tsy manam-petra an'ny vorona dia. Nolazaiko fa ny rindrambaiko dia Alpha vonona handeha Beta raha vantany vao mahazo fangatahana fanatsarana avy amin'ny client izahay.
Misaotra manokana an'i Stephen, efa mpianatro izy momba an'io ary efa nanao asa iray heck. Nifindra tany Alemana izy tamin'ny taom-pianarana fa manantena ny hanohy hametraka kaody miaraka aminy amin'ity tetikasa ity aho. WBU dia fikambanana mahafinaritra ary nahafaly ahy niara-niasa. Manantena ny fandefasana be loatra an'ity tetikasa ity izahay satria manantena ny hametraka ity fampiharana ity ho an'ny fikambanana hafa mitady fampiharana PHP Mapping. Stephen no ho mpiara-miasa amiko… tsy ratsy ho an'ny lehilahy mbola any amin'ny lisea!
Ny loharano fanampiny dia ny ohatra kaody Mike ary koa Ben, mpamorona iray miaraka aminy Rarebird izay nanangana fampiharana Google Maps mahavariana tao Fanimation.
Tags: toro-lalanagoogle maps apisarintanysari-mpahita fivarotanastore locator
Manify noho ny iPhone?
Sep 13, 2007 amin'ny 5: 03 AM
Salama Doug: miarahaba anao sy ireo mpandraharaha hafa nahavita ity tetik'asa ity - azoko antoka fa hankasitraka izany ireo tompona magazay WBU. Mihabetsaka ny mpanjifany (ary mety hanana tompona fivarotana liana amin'ny fividianana franchise) no mahita ny Wild Birds Unlimited amin'ny alàlan'ny Internet, izay mahatonga azy ireo ho zava-dehibe ny zavatra niainany voalohany tamin'ny orinasa. Ny fampiharana vaovao an-tsarintany dia azo antoka fa fanatsarana ny sarintany tsy miova. Manantena aho fa hamorona orinasa vaovao ho anao ity - asa tsara indray.
Sep 13, 2007 amin'ny 9: 21 AM
Ity azo antoka ity dia manomboka mihodina hatrany. Misaotra nampisaraka ahy an'io. Fahafinaretana foana izany.
Sep 13, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Tsy azoko lazaina aminao ny fahagagana nataon'ny mpiambina Wild Birds Unlimited izay nahazo ny tampon'ity androany ity! Tsy tamin'ny fomba ofisialy no tao amin'ny fandaharam-potoananay fa nangataka minitra vitsivitsy aho tamin'ny fiandohan'ny andro mba hampisehoana izany. Tonga dia tsikaritr'izy ireo avy hatrany ny fanatsarana mahatalanjona amin'ny toerana itadiavan'ny mpivarotra anay ankehitriny. Faly manokana izy ireo tamin'ny fiasa fitarihana fiara.
Doug, nahafaly anao niara-niasa koa. Na iza na iza mitady mpamorona manan-talenta, manolo-tena ary mifantoka amin'ny mpanjifa dia tsy mety diso aminao! Misaotra tamin'ny asa mafy rehetra ary misaotra ny ekipanao. Mahatonga ahy ho tsara tarehy ianareo.